33 Responses to “အမေ့ကိုမုန်းတယ်”
ရက်စက်လိုက်တဲ့သားပဲ၊ ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးတော့တွေးနေတာ မျက်လုံးကတော့ သားကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်လိမ့်မယ် လို့။
အမေ့ကို ပိုသတိရသွားပြီ။ အီးဟီးဟီး
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ဖတ်မိရင် ကြားမိရင် တစ်ကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဖတ်ဖူးတယ် ဖတ်ဖူးတယ်..အစ်မရေ..ကျွန်တော်တောင် အဲဒီပို့စ်ကို အစ်မရေးတာမှန်းမသိပဲ မေးလ်ထဲဝင်လာလို့ ပြန်မျှဖူးသေးတယ်...နောက်မှ အစ်မရေးမှန်းသိလို့ လင့်ခ် ပြန်ထည့်ရသေးတယ်..
ရေးတာပီပြင်လို့ ရုိုင်းစိုင်းတကုိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သားဆိုးကိုမုန်းမိတယ်။ ဒီလိုလူတွေတကယ်မရှိပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ခုမှဖတ်ဖူးတာပါ.. နောင်တဆိုတာအချိန်လွန်မှရတတ်လို နောင်တဆိုတဲ့နာမည် တွင်နေရတာပဲမဟုတ်လားဗျာ.. အားလုံးကျေးဇူးရှင်တွေကို ကျေးဇူးကန်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးမရောက်ရပါစေနဲ့လို့ ဆန္ဒလေးပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. ရှည်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော်.
ဦးဖိုးကျားရဲ့ မင်းကတော်ဝတ္ထုလေးကို သတိရမိတယ်။
ခေတ်သစ်ညွန့်မေတွေ ဒီလိုသားမျိုးတွေ နောက်ထပ် မပေါ်ပါစေနဲ့ ... ။ အမေတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေကို မမြင်ချင်တော့လို့ပါ ..........
ဖတ်ပြီးပါပြီ ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်၊ အဲဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊
အမှန်ကို အရင်ထဲက သားကိုဖွင့်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်... ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်ကြုံရမှာ မဟုတ်ဘူး... သားကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်မပြောခဲ့တာက မိခင်ရဲ့ အမှားပါ...။ အမှန်အတိုင်းပြောပြဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သားအနေနဲ့လည်း ငရဲကျစရာ အဖြစ်နဲ့ မကြုံနိုင်သလို မိခင်အနေနဲ့လည်း သေသည်အထိ အထီးကျန် ကြေကွဲနေစရာမလို ဘူးပေါ့....။ ဦးဖိုးကျား ရဲ့ ညွန့်မေနဲ့ တော့ တူသလိုလို ထင်ရပေမဲ့ မတူပါ။
ဖတ်ပြီးတာတော့ ကြာပြီ.. ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ် နင့်နေတာပဲ...
ရင်နင့်အောင်ကို ခံစားရပါတယ် ကျေးဇူးပါ
မိဘနဲ့သားသမီးကြား ခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေတွေ့ရရင် မျက်ရည်ကျရတယ်။
ပြောရရင် တို့လည်းအမေ့ကိုမုန်းခဲ့ဖူးတယ်..ဘာလို့လည်းသိလား တို့ညီအစ်မ၂ယောက်ကို ထားခဲ့ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုတယ်..ငယ်ငယ်က ခနခနစကားနာထိုးဖူးတယ်.အမေ့နေရာမှာ သမီးသာဆိုရင် နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲ သမီးတွေနဲ့လုပ်ကိုင်စားမှာပဲလို့..သူ့ခံစားချက်ကိုနားမလည်ဘူး
တစ်ကယ်တော့ အမေက အရမ်းအေးပြီး လောကကြီးက်ိုကြောက်တတ်သူ..နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြိး သမီးတွေနဲ့ သူ့ဘ၀ကိုရပ်တည်မယ်မှန်းထားတာ..ဒါပေမယ့်သူ့အိမ်မက်တွေဖြစ်မလာခဲ့ပဲ နောက်အိမ်ထောင်ပဲရသွားတယ်..နောက်အိမ်ထောင်နဲ့မွေးတဲ့ကလေးတွေကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ တို့ညီအစ်မတွေကို လစ်လျူ ရှူသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်. တို့ညီအစ်မကလည်း သိပ်ပြီးမာနကြီးတယ် စာကြိုးစားပြီး ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်. ဘ၀တစ်ခုစီကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ထောင်ခဲ့တယ်. တို့မမလည်း မြန်မာပြည်မှာ သူ့ ဘ၀နဲ့သူ ပြည့်စုံပါတယ်.တို့လည်း နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြိး သမီးလေးတစ်ယောက်တောင်ရနေပြီ
တို့က အငယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလိုချင်တာမရခဲ့တော့ အမေကိုတော်တော်ပြောခဲ့တယ်..အရွယ်ရောက်တဲ့အထိစကားမပြောခဲ့ဘူး..အခုတော့ အမေလိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ပေးပါတယ်..သူအပေါ်ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး
ငြင်ငြင်သာသာပြောခဲ့တယ်..အမေလည်းတစ်ကယ်တော့ သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူလုပ်ခဲ့တာတွေပါ..သူက အကောင်းတွေကို ပဲတွေးခဲ့တာလေ..အမေ့ဆီကရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေက အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးမှပြုခဲ့တယ်..ဘယ်အရာကိုမဆို အဆိုးကိုအရင်တွေးပြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကြိုးစားတယ်. သမီးလေးကိုလည်း ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ နေတယ်စကားပြောတယ်..အမေကသူ့ဘ၀ရဲ့ရင်းလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကို တို့ညီအစ်မ တွေလက်တွေ့ဘ၀မှာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်
တစ်ကယ်တော့ အမေ့ကို အရမ်းချစ်ခဲ့တာပါ
မိုက်နောင်တမို့ သံသရာဝဋ်ကြွေးတော့ ပေးဆပ်ရအုံးမှာပေါ့ကွယ်။ မိဘကခွင့်လွှတ်တော့ ပိုလို့သာဆိုးပြီပေါ့လေ။
အမေရဲ့ ဒီမျက်လုံး ဆုံးရှုံးရတာဟာ ဒီသားအတွက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကြိုတင် မှန်းထားပေမယ့် အဆုံးရောက် တော့လည်း ဝမ်းနည်းရတာပါပဲ၊ ဇတ်ကို ပိုနာသွားအောင် အမေက မပြောဘဲ ထားခဲ့သလားလို့၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြောလိုက်ရင် သားကလည်း အမေ့ကျေးဇူးကို ပိုသိ၊ အမေကလည်းပျော်...၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ မချောရဲ့ ညက်ညောတဲ့ ဘာသာပြန်မှာ နင့်နေခဲ့တယ်...။
ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူးး ..း(
တော်တော် မိုက်မဲတဲ့ သား။
၀မ်းနည်းတာရော ဒေါသထွက်တာရော စုပြုံသွားတယ်။
တောက်.... ဟင်းးးးးးးးးးးး။ အမေကို အဲဒီလို ဆက်ဆံစရာလား။
မိဘရုပ်ဆိုးလို့ သားသမီးတွေ ရှက်တဲ့အဖြစ်မျိုး အပြင်လောကမှာ တကယ်ပဲရှိနေပါတယ်..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေဟာ အမေပါပဲ..
အစ်မတင်ခါစက ဖတ်တုန်းကလည်း အရမ်းခံစားရတယ်။ အခုလည်း ဝမ်းနည်းမိနေတုန်းပဲ။ တကယ်ကို ရင်နင့်စရာကောင်းတဲ့ မိခင်တစ်ဦးအကြောင်း ရေးဖွဲ့လိုက်တာပါပဲ။ သားက အမေ့စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို စောစောစီးစီးသိသွားရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။ သနားလွန်းလို့ပါ။
အရင်တစ်ခါတုန်းကလည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အခုလည်း ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့ကတည်းက ဖတ်ချင်စိတ်ပျင်းပြစွာနဲ့ပဲ တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။ ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ဂရုဏာသက်မိပါတယ်။ မိဘတွေ သေမှ နောင်တ ရမယ့်သားမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း လမ်းညွှန် သတိဖော်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်.. မမချောရေ...
ရင်ထဲ နင့်ကနဲပဲ....၊သားဖြစ်သူကိုလည်း အပြစ်မတင်ချင်
ပါဘူးလေ...၊အမေတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခင်
အင့်...စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ချောရယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ၀မ်းနည်းလိုက်တာကွယ်။ အဲဒီလို ခပ်ဆင်ဆင်လေးလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ သိလား။ သူ့အမေရဲ့ မျက်နှာတခြမ်းမှာက
ဒဏ်ရာတွေနဲ့လေ။ သူ့သားက သူ့အမေကို ကျောင်းမခေါ်
ချင်ဘူး။ နောက် မေးကြည့်တော့မှ အိမ်မီးလောင်တုန်းက
ချောရဲ့ ဘာသာပြန်မှုတွေဟာ တကယ်ပဲ ပြေပြစ်ညက်ညော ချောမောလှပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်မချောရေ..။ ဖတ်တိုင်းလည်း ခံစားချက်ကအတူတူပါပဲ..မျက်ရည်ဝဲမိရတယ် တကယ်..။ အသက်တောင်ပေးရဲတဲ့ မိဘမေတ္တာကတော့ တုနှိုင်းစရာမရှိပါဘူး.။
ဒီဘာသာပြန်လေး ချောရေးထားတာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလည်းထပ်ပြီးဖတ်သွားတယ်။ ဖတ်တိုင်းလည်း မျက်ရည်ကျတယ်.. :(
ဒီပို့(စ်)လေးကို ဖတ်ရင်း အမေ ကို မောင်းထုတ်နေတဲ့ စာပိုဒ်လေးကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.
အမေ ဆုံးသွားတော့မှ ရလာတဲ့ သူ့ နောင်တအတွက်လဲ နှောင်းလိုက်တာလို့ ထင်မိတယ်
ဗဟုသုတပေါ့ ကျမ ကူးပြီး ကျမဘလော့မှာ ပြန်တင်လိုက်တယ်...ကျမဆို အဲဒါဖတ်ပြီးတာနဲ့ ငိုတယ်သိလား...